किन गरिएन लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन ? महेश बस्नेतको उजुरी अख्तियारबाटै गायव - Nepal's Digital News Paper
किन गरिएन लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन ? महेश बस्नेतको उजुरी अख्तियारबाटै गायव
काठमाडौं । पाँच बर्षअघि तत्कालिन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महेश बस्नेतले तत्कालिन माओवादी शिविरमा भएको भ्रष्टाचारलाई लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताबिरुद्ध उजुरी दिए । उजुरी दिएको पाँच बर्ष बितिसकेको छ तरपनि माओवादी शिविरभित्र भएको भ्रष्टाचारको छानविन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्र गम्भीर निन्द्रामा सुतिरहेको छ ।
२०७१ साल असोज ५ गते तत्कालिन युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतसहितको टोलीले तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरालगायतका नेताबिरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी दिएका थिए । २०७३ साल भदौ ३१ देखि उजुरीमाथी छानविन शुरु गरिएको औपचारिक जानकारी अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएको पनि थियो । अख्तियारले औपचारिकरुपमा छानविन थालेको लगभग तीन बर्ष पुग्न थाल्यो । तरपनि शिविरमाथीको भ्रष्टाचारले कानुनी बाटो पाउन सकेको छैन ।
युद्धबाट शान्तिमा रुपान्तरण हुँदै गर्दा तत्कालिन जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा राखिएको थियो । शिविरमा रहेका लडाकुलाई सरकारले रासन भत्ता दिने गरेको थियो । त्यही रासनमा ४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै युवा संघ नेपालले लिखित उजुरी दिएको थियो । उजुरी दिएको पाँच बर्षसम्म छानविन कहाँ पुग्यो ? युवा संघका केही नेताहरुले अहिले पनि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको भ्रष्टाचार राजनीतिक दवावमा दविरहेको छ । उजुरी दिने तत्कालिन एमालेको युवा संघ र अभियुक्त पार्टी माओवादी दुवै एक भइसकेका छन् । कहिलेपनि नखुल्ने गरी शिवरको भ्रष्टाचार अख्तियारमा बन्द भइसकेको छ । ‘शिविरको भ्रष्टाचार द्धन्द निरुपण तथा ब्यवस्थापनमै राखियो’ उजुरी कर्ता नेकपा सांसद महेस बस्नेतले भने ‘अख्तियारले भ्रष्टाचारलाई पनि द्धन्द ब्यबस्थापनका रुपमा लिएको हुनसक्छ । त्यही भएर छाननिव भएन ।’ द्धन्द र सुशासनको कुरा फरक हो तरपनि अख्तियारले सुशासनलाई द्धन्दसँग गरेको बस्नेतले आँकलन गरेका छन् । युवासंघको उजुरी अख्तियारको कुन दराजमा थन्किएको छ ? छानविनकर्तालाई नै थाहा छैन ।
२०७३ सालमा छानविन खट्टिएका कर्मचारी यतिबेला अख्तियारमा छैनन् । कतिपयले अवकास पाएभने कतिपयको सरुवा भइसकेको छ । अख्तियारले प्रतिबेदन समेत बनाउन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।
कुनै समय लोकमान सिंह कार्कीले लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारलाई माओवादी तर्साउने हतियार बनाएका थिए । लोकमानलाई सर्वाेच्च अदालतले बोलाएलगतै उनले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार छानविन भइरहेको बताएका थिए । लोकमानको बर्हिगमनसँगै लडाकु शिविरभित्रको छानविन अख्तियारभित्रै समाधि बनेको छ ।